I-6 movie premieres eyonwabisayo ngo-Agasti | IBezzia
UMaria vazquez | 22/07/2021 12:00 | isiko
Njengenyanga nganye siyaqhubeka nokuzisa ezinye Iifilimu zokuqala onokuyonwabela kumagumbi kungekudala. Kungenxa yokuba zimbalwa izicwangciso ezibonakala ngathi ziyahlaziya kuthi njengokuya kwi-cinema ekufuphi kuwe ngenjikalanga enye ngo-Agasti ukuya kubona enye yezi bhanyabhanya.
Phakathi kwazo kukho yonke into encinci, Ukusuka kwimiboniso bhanyabhanya ye-antihero ukuya kwiingxoxo zengqondoUkuya kwii-comedies, iidrama kunye nakho konke ukudityaniswa okunokwenzeka kwezi. E-Bezzia sele sinerekhodi esifuna ukuyibona. Kwaye wena? Yeyiphi eyona ibamba umdla wakho?
2 Apho kufanelekile khona ezimbini
3 Iqela lokuzibulala
4 Imimangaliso emincinci ePeckham St.
5 Ihlobo ezintathu
6 Phila bubomi
Idilesi: M. Night Shyamalan
Abalingisi: UGael García Bernal, uVicky Krieps, uRufus Sewell
Ixesha 'liyonwabisa' ngokwengqondo elikhokelwa nguM. Night Shyamalan, elandela usapho ngexesha labo hlala elunxwemeni lweparadisi. Indawo ikwindawo ekude kwaye ifihla into emalunga nokutshintsha ubomi bomntu ngamnye kubo. Njengoko iiyure zihamba, nganye kuzo iya ikhula kwaye indala, ukuya kwinqanaba lokuba ubomi bayo buya kuncitshiswa bube lolo suku.
Apho kufanelekile khona ezimbini
Idilesi: UPaco Caballero
Abalingisi: U-Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Luis Callejo, Anna Castillo, Pilar Castro, Álvaro Cervantes, Carlos Cuevas, Verónica Echegui, Miki Esparbé, Ricardo Gómez, María León, Melina Matthews, Ana Milan ...
Isibini esitshixelwe kwinkqubo yesiqhelo, intombi ethandekayo, umfana osemncinci ophoxekile kwimicimbi yakhe yothando yakutshanje, abazala bakhe ababini bohlukene ukusukela ngehlobo labo lokugqibela edolophini, iqela labahlobo abafuna ukuzama ... Ngobusuku bunye, bonke uya kufumana iimeko eziphambeneyo xa usiya ku iklabhu yeswins, indawo yokuntywila apho kungekho mkhethe.
Idilesi: UJames Gunn
Abalingisi: UMargot Robbie, uViola Davis, uJoel Kinnaman
Un iqela villains super Bavalelwe e-Belle Reve, intolongo enokhuseleko olunezinga eliphezulu lokufa e-United States. Ukuphuma apho baya kwenza nantoni na, nokuba bajoyine iqela le-Task Force X, elizinikeleyo ekwenzeni imisebenzi yokuzibulala phantsi komyalelo ka-Amanda Waller. Baxhobile kakhulu bathunyelwa eCorto Maltese Island, ihlathi elizele ziintshaba.
Imimangaliso emincinci ePeckham St.
Idilesi: UVesela Kazakova, uMina Mileva
Abalingisi: Irina Atanasova, Angel Genov, Orlin Asenov
U-Irina ngumama ongatshatanga onemvelaphi yaseBulgaria oza eLondon evela eBrexit ukuzama ukusebenza njengomzobi. Ukudinwa yimeko eveliswe kwezona ndawo zihlelelekileyo ngenxa yokuphakanyiswa kunye namaxabiso aphezulu okurenta, zama ukuhlanganisa uluntu lwakho Abamelwane bayala inkqubo kunye. Nangona kunjalo, baphila ngenkxaso-mali kodwa abayijoyini injongo ka-Irina.
Idilesi: USandra kogut
Abalingisi: URegina Casé, u-Otávio Müller, uGisele Fróes
Rhoqo ngoDisemba phakathi kweKrisimesi kunye neminyaka emitsha, uEdgar noMarta babamba umbhiyozo wosapho kwindlu yabo entle yasehlotyeni ngaselwandle. Ngo-2015 yonke into ibonakala ilungile, ngaphandle kweminxeba ethile exineneyo kunye nendwendwe elinxibe ikhonkco elektroniki. Ngo-2016 iqela lonyaka liye lacinywa ngokukhawuleza. Kwenzeka ntoni kubantu abangabonakaliyo abahlala kumjikelo wezityebi xa obu bomi busiwa? Ngokujonga komqeshwa kunye notata okhulileyo okhohliweyo, sibona a umzobo weBrazil wangoku kanye ngaphambi kwentlekele ka-2018. Iimpawu zazikho zonke, kodwa sasingazi ukuba sizifunda njani.
Idilesi: UDani de la Torre
Abalingisi: UAdrián Baena, uJuan del Pozo, uRaúl del Pozo, uDavid Rodríguez, uJavier Casellas
Ihlobo 1985. Njengonyaka ngamnye, iqela labahlobo liyadibana kwakhona kwiidolophu zabo. Nangona kunjalo, lo nyaka wahlukile kwabanye. Ziyaziqonda ngakumbi iingxaki zehlabathi lokwenyani kunye nesoyikiso sokukwazi ukwahlula. Ke ngoko, kwaye banamathele kubuhlobo babo, baya kwenza i- adventure ngexesha lobusuku baseSan Juan ukufumana intyatyambo yomlingo ethi, ngokwentsomi, ikhule phezulu entabeni kwaye inokwenza ukuba iminqweno izaliseke. Ngenxa yokuba umnqweno wabo kuphela kukuba bakwazi ukuqhubeka kunye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » isiko » Iimboniso bhanyabhanya ezi-6 zokuzonwabisa ngo-Agasti